Madaxweynaha Turkiga oo cambaareeyay qarixii bahalnimo ee maanta - Hargeele - Wararka Somali State
Muqdisho(SONNA) Madaxda Dowladda Dalka Turkiga ayaa si kulul u dhaleeceeyay weerarkii kooxaha argagixisadu ay ka geysteen Muqdisho,kaasi oo ay ku dhinteen dad badan oo rayid ahaa,halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Dalka walaalaha aanu nahay ee Turkiga Raccep Tayid Erdogan ayaa cambaareeyey qaraxaasi bahalnimo oo loo soo maleegay shacabka,isagoo tacsi ku aaddan dhacdadaasi u diray Dowladda Soomaaliya iyo shacabkeed.
“Waxaan cambaareynayaa weerarkii argagixiso ee Muqdisho,Labadeenna muwaadin iyo walaalaheyga Soomaaliyeed ee geeriyooday waxaan Eebbe u weydiinayaa naxariis, dhaawacana caafimaad deg-deg ah,Qarankeenna iyo shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha nahay waan u tacsiyeynayaa,Turkey, weligeed Soomaaliya waa garab taagan yahay .”ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Turkiga Odugan.
In kabadan 70 qof ayaa ku geeriyootay tiro 100 kor u dhaafaysana waa ay ku dhaawacmeen qarixii maanta kooxaha argagixisada Alshabaab ay ka geysteen Ex-cantrool Afgooye.
Dowladda badan ayaa si kulul u cambaareeyey falkaasi,kuwaasi oo dhamaantoodi muujiyay sida ay u garab taagan yihiin Dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda.
Madaxda sare ee shirkadii Barakaat oo soo dhaweeyey go’aankii Mareykanka ee qaadista xaiyraada
Marwada koowaad ee Qaranka oo la kulantay Wasiirka Caafimaadka Turkiga iyo Madaxa hay’adda TIKA “SAWIRRO”